Qoor Qoor oo Safiirka Qatar kala hadlay dhismaha Dekedda Hobyo | KEYDMEDIA ENGLISH
Kulankaan oo ah Midkii ugu horreeyay oo Qoor Qoor la yeesho Safiirka tan iyo doorashadiisii Febuary 2020, wuxuuna kala hadlay goorta la fulinayo ballanqaadkii Qatar ee dhismaha Dekedda Hobyo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye [Qoor-Qoor], oo maalmahan ku sugan Muqdisho, ayaa kulan kula yeeshay hoyga uu ka degan yahay Caasimadda Safiirka Dawladda Qatar ee Soomaaliya Hasan bin Hamza Asad Mohamed.
"Waxaa maanta [Khamiis] hoygeyga Muqdishu kusoo dhaweeyay safiirka Dalka Qatar u fadhiya Soomaaliya Danjire Xamza iyo wafdi uu hoggaaminayay. Safiirka waxaan iska xogwareysannay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka iyo tan Galmudug," ayuu ku yiri Qoor-Qoor qoraal uu bartiisa Twitter soo dhigay.
Dawladda Qatar ayaa AUGUST, 2019 sheegtay inay maal-gashi ku sameynayso Dekekadda Hobyo, kadib markii wafdi uu hogaaminayay Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Wasiirka Arrimaha Dibadda dalkan hodonka ku ah Saliida ee ku yaalla Khaliijka Carabta uu booqasho ku yimid Muqdisho, lana kulmay RW Xasan Cali Kheyre.
Shirkadda Qatar Ports Management Company (Mwani), ayaa heshiis maal-gashi la gashay Dawladda Federaalka, kaasoo qeyb ka ahaa dhismaha Dekedda Hobyo, oo mudo shacabka degan degaanada Galmudug u baahi qabeen inay u shaqeyso, oo wax kasoo degsadaan.
Dekedda Hobyo waxay ku taallaa meel istaraatiiji ah, oo ku dhaw gacan-biyoodka muhiimka ah ee Bab-el-Mandeb Strait, oo Maraakiibta aad u isticmaasha, waxaana hadii la dhiso fududeyn doontaa ganacsiga Soomaaliya iyo Caalamka.
Comments Topics: dekada muqdisho galmudug hobyo qatar qoor qoor